दोश्रो इच्छाकामना डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा मुग्लिङ्ग ब्याडमिन्टन टिम प्रथम | इच्छा खबर |
मुग्लिङ्ग : दोश्रो इच्छाकामना डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा मुग्लिङ्ग टिमले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । फाईनलमा इच्छाकामना स्वास्थ्य टिमलाई पराजित गर्दै आयोजक मुग्लिङ्ग टिमका झलक गुरुङ र निर्मल मगर प्रथम भएका हुन् ।
इच्छाकामना स्वास्थ्य टिमका सुरज गुरुङ र सम्पूर्ण श्रेष्ठ दोश्रो भए । प्रथम हुने मुग्लिङ्ग ब्याडमिन्टन टिमले नगद रु. २०,००० सहित शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र तथा द्वितिय हुने इच्छाकामना स्वास्थ्य टिमले नगद रु. १०,००० हजार, शिल्ड, मेडल र प्रमाण प्राप्त गरे ।
प्रतियोगितामा गणेश श्रेष्ठ र संयोग श्रेष्ठ तथा तक्बीर गुरुङ र शिव सिलवाल सान्त्वना भए ।
यसैबिच महिला तर्फ भने इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिङ्ग टिमका सरस्वती लामिछाने बस्नेत र शान्ति आलेमगर प्रथम र केबलकार टिमका संगिता रानामगर र सीमा थापा मगर द्धितिय भए ।
प्रतियोगितामा मुग्लिङ्ग टिमका निर्मल मगर उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । उनले ब्याडमिन्टनको ¥याकेट हात पारे ।
विजेता टिमहरुलाई एक कार्यक्रमकाबिच पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठले पुरस्कार वितरण गरे । पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्य तथा वडाध्यक्ष मोदराज सिलवालको विशिष्ट र आयोजक मुग्लिङ्ग ब्याडमिन्टन टिमका अध्यक्ष विकसा श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो ।
प्रतियोगिता मुग्लिङ्ग ब्याडमिन्टन टिमको आयोजनामा मस्र्याङ्गदी शिक्षा सदन मुग्लिङ्गको प्राङ्गणमा पुस २९ गतेदेखी आज माघ १ गते सम्म चलेको थियो ।